Golaha Wakiilada Somaliland oo ansixiyey Heshiiska Dekadda Berbera [Jawaab loo diray Barlamanka Somalia] |
Golaha Wakiilada Somaliland oo ansixiyey Heshiiska Dekadda Berbera [Jawaab loo diray Barlamanka Somalia]
March 13, 2018 Intagra buy online, generic lioresal.
Kulan ay maanta yeesheen Golaha oo guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Baashe Maxamed Faarax ayaa lagu ansixiyey heshiiska oo hadda ay saami ku wada leeyihiin Somaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, waxaana xubnaha golaha wakiilada ay u codeeyeen heshiiskaasi, iyagoo ugu jawaabay goai??i??aankii Baarlamaanka Soomaaliya.
Golaha wakiillada Somaliland ayaa ayiday maalgeshiga kheyraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha si loo xaqiijo kobac dhaqaale sida ay ku doodeen, wuxuunaAi?? Golaha Wakiillada Somaliland si weyn u cambaareeyay goai??i??aanka Baarlamaanka Somalia uga hor yimid heshiiska dekadda Berbera.
Golaha Wakiillada Somaliland ayaa goai??i??aamiyay in cid walba oo ka qeyb qaadata, taageerta ama gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaq-dhaqaayada ay wado ee lidka ku ah jiritaanka Somaliland loo aqoonsanayo Caddowga Qaranka Somaliland.